ခေတ်မီဖိနပ်သိမ်းတန်း | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-bestparticleboardfurniture.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ခေတ်မီဖိနပ်သိမ်းတန်း ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 010-65-1
Allyoung Functional ဖိနပ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့
Allyoung functional ဖြစ်စေဖိနပ်ကက်ဘိနက်တစ်ဦးစတိုင်အဘို့အပုလဲအဖြူရောင်ပြာထဲမှာဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူငွေအမီးခိုးရောင်အတွက်တံခါးများပေါင်းဘော်ရောနှော,ရိုးရှင်းကြည့်.လက်ကိုင်-မဟာတံခါးကိုပြားနှင့်အတူအခမဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုပိုမိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းစေသည်.အထူးဟာ့ဒ်ဝဲ 180 ကိုလှည့်ဖို့ဖိနပ်ထိန်သိမ်းနိုင်ပါတယ်°နှင့်ထိန်သိမ်းကိုဖြတ်ကူးနေဖြင့်သိုလှောင်ရန်နေရာကျယ်ဝန်း.Eco ဖြင့်လုပ်သောထိန်သိမ်း-ဖော်ရွေပစ္စည်းများအဝတ်လျှော်ဘို့ deattached နိုင်ပါသည်.သင်တို့သည်လည်းအလိုတော်မှာသူတို့ကိုညှိနိုင်ပါတယ်,ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖိနပ်လည်းအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းထားနိုင်.ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသင်ရွေးချယ်ဖို့အတှကျရှေးခယျြစရာအဖြစ်နှစ်ခုအထွဋ်ပူဇော်.မြင့်ဖိနပ်ကက်ဘိနက်များ၏စွမ်းရည်ဖိနပ် 42 အားလုံးအတွက်အထိဖြစ်ပါသည်.
အတိုင်းအတာ:W 80cm x ကို: D 61cm x ကို H ကို 137cm(အနိမ့်ဖိနပ်ကက်ဘိနက်) /H ကို 217cm(မြင့်မားတဲ့ဖိနပ်ကက်ဘိနက်)
ပစ္စည်း:E1-အဆိုပါဗီဒိုအဘို့အ V313 စနစ်ကဘုတ်အဖွဲ့,တံခါးနှင့်စင်ပေါ်.
Backboard:18mm E1-backboard finish ကိုအတူ V313 ဘုတ်အဖွဲ့.
edge တီးဝိုင်း:ပြားများနှင့်တံခါးများတဝိုက် banding ထူကို ABS အစွန်း.
ပတ္တာ:တံခါးပေါ်မှာရှိသမျှလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ပတ္ပျော့များမှာ-ပိတ်ပတ္. (MIT က:KingSlide)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestparticleboardfurniture.com/my/modern-shoe-rack.html
ခေတ်မီဖိနပ်သိမ်းတန်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် ခေတ်မီဖိနပ်သိမ်းတန်း ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ OEM ODM-ကျော် 25,936 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestparticleboardfurniture.com